पल शाहलाई यसकारण निकालियो ‘रेड वा इन’ चलचित्र बाट ! अब साम्राज्ञीसंग पुष्पको रोमान्स । – yuwa Awaj
पल शाहलाई यसकारण निकालियो ‘रेड वा इन’ चलचित्र बाट ! अब साम्राज्ञीसंग पुष्पको रोमान्स ।
मंग्सिर १७, २०७७ बुधबार 0
काठमाडौ : नेपाल र अमेरिकामा छायांकन हुने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘रेड वा इन’ बाट अभिनेता पल शाह बाहिरिएका छन् । चलचित्रबाट पल बाहिरिएपछि उनको ठाउँमा पुष्प खड्काको प्रवेश भएको छ ।
तीन दिन अगाडि पुष्पसँग नि’र्माण टिमको कागजी सम्झौ’ता भइसकेको छ । अहिले चलचित्र ‘कृष्ण लिला’ को छायांकनमा व्यस्त रहेका उनले यसपछि ‘रेड वा’इन’ का लागि समय निकाल्नेछ । अमेरिकामा रहेका रमेश एमके पौडेलले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहसँग पलको जोडी पक्का भएको थियो ।
गो’प्य स्रो’तले दिएको जा’नकारी अनुसार, कथावस्तु, कलाकार र टाइटल परिव’र्तनमा पलले द’बाब दिन थालेपछि निर्माण टिमले उनको ठाउँमा पुष्पलाई अनु’बन्ध गरेको हो । चलचित्रमा पलभन्दा अगाडि निर्माण टिमले साम्राज्ञीलाई अनुब’न्धित गरेको थियो । चलचित्रमा साम्राज्ञीको सशक्त भू’मिका रहेको बुझिएको छ ।
आफ्नोभन्दा साम्राज्ञीको भू’मिका सशक्त भएका कारण पलले निर्देशक पौडेललाई चलचित्रको क’थावस्तु परि’वर्तन गर्न आग्र’ह गरेको स्रो’त बताउँछ । तर, पौडेल उनको कुरामा सहमत भएनन् । यसपछि पलले चलचित्रबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।
अब ‘रेड वा’इन’ मा पुष्पले साम्राज्ञीसँग अन’स्क्रिन रोमान्स गर्नेछन् । चलचिको २० प्रतिशत छायांकन काठमाडौं र ८० प्रतिशत अमेरिकामा हुनेछ । चलचिमा सन्दिप क्षेत्रीको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ ।
चलचित्रमा व्यवसायी पासाङ लामा र आर्यन पौडेलको लगानी रहने छ । सह-निर्मातामा निरू भण्डारी रहने छिन् । आर्यन फिल्मस् प्रोड’क्शन र बोधी एच.डि. अमेरिकाको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्रको पटकथा तथा संवाद शबिर श्रेष्ठले तयार पारेका हुन् ।
Prevजनार्दन शर्मा भन्नुहुन्छ : मैले नियुक्ति गरेको कुलमानलाई जसरी फाल्नुभयो त्यसरीनै आफू बिदा हुनुस् !
Next“पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा” : मुलुक समृद्धि र उत्पादनतर्फ अगाडि बढेको छ… हेर्नुहोस्।
श्रीमान् परदेशमा : श्रीमती यस्तो पौरख गर्दै घरदेशमा, महिनाको लाखौं आम्दानी गर्दै…हेर्नुहोस् ।
माहाबिर पुनले गण्डकी प्रदेशलाई दिए एम्बुलेन्स…हेर्नुहोस । उहाँलाई उच्च सम्मान !
प्रधानमन्त्री ओली पनि टिकटकमा एकाएक भाइरल ! एकैदिनमा १२ लाख भन्दा बढीले हेरिसके भिडियो…हेर्नुहोस् ।
बुटवलमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै बृहत् मोटरसाइकल र्‍याली…हेर्नुहोस् ।
मनाङेबारे बाबुराम : रत्नाकरलाई बाल्मिकी बन्न किन नदिने ? (11)
८.	मनाङेबारे बाबुराम : रत्नाकरलाई बाल्मिकी बन्न किन नदिने ? (11)